AMBANJA SY NOSY BE : Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly ny fotoam-piotazana lavanila
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy, omaly, tao amin’ny Fokontany Ambalavelona ny fotoam-piotazana lavanila ao Ambanja sy Nosy Be. 16 mai 2017
Tonga tany an-toerana nanome voninahitra ny lanonana mifanaraka amin’izany ny sekretera jeneralin’ny Faritra Diana.
Efa maro ireo mpanangom-bokatra na « collecteurs » avy any amin’ny faritra Sava tonga ao an-toerana ary efa maherin’ny 150 ny isan’ireo efa nahazo karatra avy amin’ny Pnv (Plateforme nationale de vanille) araka ny loharanom-baovao. Hatramin’ny omaly aloha mbola tsy betsaka ny vokatra navoakan’ireo mpamboly lavanila any an-toerana. Raha 60 000 ariary no nividianana ny lavanila manta iray kilao tamin’ny fanombohana ny fotoam-piotazana tamin’ny taon-dasa ao amin’ny faritra Sambirano sy manodidina dia mieritreritra hampiakatra izany ho 260 000 ariary ireto farany amin’ity taona ity.
« Mety tsy hiakatra ho 260 000 ariary ny iray kilao amin’izao fanombohana ny fotoam-piotazana lavanila izao fa mety hahatratra 200 000 ariary kosa araka ny fahitako azy », hoy ny fanazavan’ny mpandraharaha iray any ao Ambanja. Tsara ny manamarika fa ho an’ny Distrikan’Ambilobe sy manodidina hisokatra amin’ny 22 mey ho avy izao ny fotoam-piotazana lavanila raha 20 jona ho avy izao kosa ny an’ny Faritra Sava.